တက်ကသိုလျစာမေးပှဲဖွဆေိုခှငျ့မရတဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ ဘာဆကျလုပျသငျ့လဲ ? ? ? – SoShwe
Home/Education/တက်ကသိုလျစာမေးပှဲဖွဆေိုခှငျ့မရတဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ ဘာဆကျလုပျသငျ့လဲ ? ? ?
တက်ကသိုလျစာမေးပှဲဖွဆေိုခှငျ့မရတဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ ဘာဆကျလုပျသငျ့လဲ ? ? ?
So Shwe May 29, 2020	Education Leaveacomment
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပညာရေးစနဈအရ ကြောငျးသူကြောငျးသားအမြားစုဟာ အထကျတနျးအောငျပွီးတာနဲ့ ကိုယျရဲ့ပညာအရညျအခငျြးနဲ့ကိုကျညီပွီး ကိုယျစိတျပါဝငျစားတဲ့ပညာရပျကို တက်ကသိုလျကြောငျးမြားမှာ ဆကျလကျသငျယူနိုငျဖို့အတှကျ အဓိကလိုအပျတာကတော့ တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့အမှတျပဲဖွဈပါတယျ။ ယခုလကျရှိမှာတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ပုဂ်ဂလိကပိုငျတက်ကသိုလျ/ကောလိပျတှေ အမြားအပွား တညျရှိနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ ကိုယျစိတျပါဝငျစားတဲ့ပညာရပျကို နိုငျငံပိုငျတက်ကသိုလျတှမှော တကျရောကျသငျယူနိုငျဖို့အတှကျ တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့အမှတျမမှီခဲ့ရငျတောငျ ပုဂ်ဂလိကပိုငျတက်ကသိုလျ/ ကောလိပျတှမှော တက်ကသိုလျဝငျကွေး သိနျးခြီသှငျးပွီး တကျရောကျနိုငျပွီပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံက နိုငျငံပိုငျတက်ကသိုလျကြောငျးတှမှော လစဉျသှငျးရတဲ့ ပညာသငျကွေးဟာ ပုဂ်ဂလိကပိုငျတက်ကသိုလျကြောငျးကို တကျရောကျတဲ့အခါမှာသှငျးရတဲ့ ပညာသငျကွေးထကျ နညျးနတောကို တှရေ့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ဖှံ့ဖွိုးပွီးနိုငျငံမြားနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံအခြို့မှာရှိတဲ့ နိုငျငံပိုငျ (သို့) ပုဂ်ဂလိကပိုငျ အဆငျ့မွငျ့တက်ကသိုလျတှမှော ပညာသငျကွားနိုငျဖို့အတှကျ နိုငျငံတကာက တက်ကသိုလျကြောငျးသားတှဟော ပညာသငျကွေးအမြားအပွားသှငျးရပါတယျ။ အဆိုပါတက်ကသိုလျကြောငျးသူကြောငျးသားတှဟော ဘှဲ့ရပွီးတာတောငျမှ တက်ကသိုလျမှာပညာသငျယူခဲ့တဲ့ ပညာသငျကွေး အကွှေးကိုဆပျလို့ မပွီးနိုငျသေးတာမြိုးတှလေညျး ရှိပါတယျ။
အဆငျ့မွငျ့ပညာရေးဆိုငျရာ စာရငျးစဈအဖှဲ့အစညျးရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ ကြောငျးသူကြောငျးသား အမြားစုဟာ သူတို့ကိုယျတိုငျကိုငျတှယျဖွရှေငျးလို့မရတဲ့ ကံကွမ်မာရဲ့အလှညျ့အပွောငျးတှကွေောငျ့ စာသငျနှဈတဈခုရဲ့ နောကျဆုံးစာမေးပှဲကို ဝငျဖွခှေငျ့မရတာမြိုးတှေ ကနျြရှိသေးတဲ့ ပညာသငျနှဈတှကေို ဆကျလကျမတကျရောကျနိုငျတာမြိုးတှေ ကွုံတှတေ့တျရပါတယျ။
ဥပမာ – တက်ကသိုလျကြောငျးသားတဈယောကျဟာ ကနျြးမာရေးကွောငျ့ ပညာသငျနှဈတဈနှဈစာရဲ့ နောကျဆုံးစာမေးပှဲကို ဝငျမဖွနေိုငျတဲ့အခါမြိုးမှာ တက်ကသိုလျကအရာရှိတှအေနနေဲ့ အဆိုပါကြောငျးသားကို စာမေးပှဲကသြူအဖွဈ စာရငျးသှငျးလိုကျတာမြိုးပါ။ နိုငျငံတကာမှာက တဈနှဈတာပညာသငျစရိတျဟာလညျး အလှနျကွီးတာကွောငျ့ စာမေးပှဲကသြူကြောငျးသားတှဟော ငှကွေေးပိုငျးဆိုငျရာ အခကျအခဲမြားကို ကွုံတှလေ့ာရပါတယျ။
တက်ကသိုလျကြောငျးပညာရေးဝနျကွီး Michelle Donelan က “တက်ကသိုလျကြောငျးအုပျခြုပျရေးမှူးတှအေနနေဲ့ စာသငျနှဈတဈခုရဲ့ နောကျဆုံးစာမေးပှဲမဖွနေိုငျဆိုနိုငျတဲ့ ကြောငျးသူကြောငျးသားတှကေို ငှဲ့ညှာတဲ့အနနေဲ့ သူတို့အတှကျ အဆငျပွမေယျ့ အခှငျ့အရေးတှစေီမံပေးသငျ့တယျ။”လို့ ပွောကွားခဲ့ဖူးပါတယျ။
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ တက်ကသိုလျစာမေးပှဲဖွဆေိုခှငျ့မရလိုကျတဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသူကြောငျးသားတှေ ပွုလုပျသငျ့တဲ့နညျးလမျးတှကေို အောကျမှာဖျောပွပေးထားပါတယျ။
၁။ တက်ကသိုလျကြောငျးတိုငျးမှာ တက်ကသိုလျကြောငျးသူကြောငျးသားတှေ လိုကျနာရမယျ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ ရှိပမေယျ့လညျး ကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ ကိုယျတိုငျမထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးပွဿနာ နဲ့ ယာဉျမတျောတဆမှုတှကွေောငျ့သာဆိုရငျတော့ တက်ကသိုလျရဲ့အကွီးအကဲတှေ နားလညျပွီးလကျခံပေးနိုငျအောငျ ကွိုးစားပွောဆိုသငျ့ပါတယျ။
၂။ တက်ကသိုလျကြောငျးသူကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ ကိုယျကွုံတှနေ့ရေတဲ့ပွဿနာတှကေို ကိုယျ့ကိုကူညီပေးနိုငျမယျ့ တက်ကသိုလျကြောငျးက ဆရာ/ဆရာမတှကေို ပှငျ့လငျးစှာပွောပွပွီး အကူအညီတောငျးခံဖို့ ကွောကျရှံ့မနသေငျ့ပါဘူး။
၃။ တက်ကသိုလျကြောငျးသားတဈဦးက စာသငျနှဈတဈခုရဲ့စာမေးပှဲကို ဖွဆေိုဖို့အတှကျ အခကျအခဲရှိတယျဆိုရငျ ခိုငျလုံတဲ့အကွောငျးပွခကျြတှကေို စုဆောငျးထားပွီး တက်ကသိုလျကြောငျးဆရာ/ဆရာမတှကေို ကွိုတငျအသိပေးကာ အကူအညီတောငျးသငျ့ပါတယျ။
၄။ အခကျအခဲကွုံတှနေ့ရေတဲ့အကွောငျး အကူအညီတောငျးခံစာကို တက်ကသိုလျက ဆုံးဖွတျပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ အကွီးအကဲတှကေ လကျမခံတဲ့အခါမြိုးမှာ ဘာကွောငျ့ခှငျ့မပွုလဲဆိုတာကို သိရှိလိုကွောငျး တောငျးဆိုသငျ့ပွီး အခှငျ့အရေးထပျပေးစလေိုကွောငျး အသနားခံစာတငျသငျ့ပါတယျ။
တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်မရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ ? ? ?
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်အရ ကျောင်းသူကျောင်းသားအများစုဟာ အထက်တန်းအောင်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ပညာအရည်အချင်းနဲ့ကိုက်ညီပြီး ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ပညာရပ်ကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းများမှာ ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အဓိကလိုအပ်တာကတော့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်တွေ အများအပြား တည်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ပညာရပ်ကို နိုင်ငံပိုင်တက္ကသိုလ်တွေမှာ တက်ရောက်သင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အမှတ်မမှီခဲ့ရင်တောင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်တက္ကသိုလ်/ ကောလိပ်တွေမှာ တက္ကသိုလ်ဝင်ကြေး သိန်းချီသွင်းပြီး တက်ရောက်နိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံပိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာ လစဉ်သွင်းရတဲ့ ပညာသင်ကြေးဟာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကို တက်ရောက်တဲ့အခါမှာသွင်းရတဲ့ ပညာသင်ကြေးထက် နည်းနေတာကို တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအချို့မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပိုင် (သို့) ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်တွေမှာ ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟာ ပညာသင်ကြေးအများအပြားသွင်းရပါတယ်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ ဘွဲ့ရပြီးတာတောင်မှ တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ယူခဲ့တဲ့ ပညာသင်ကြေး အကြွေးကိုဆပ်လို့ မပြီးနိုင်သေးတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အဆင့်မြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ကျောင်းသူကျောင်းသား အများစုဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ ကံကြမ္မာရဲ့အလှည့်အပြောင်းတွေကြောင့် စာသင်နှစ်တစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံးစာမေးပွဲကို ဝင်ဖြေခွင့်မရတာမျိုးတွေ ကျန်ရှိသေးတဲ့ ပညာသင်နှစ်တွေကို ဆက်လက်မတက်ရောက်နိုင်တာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့တတ်ရပါတယ်။
ဥပမာ – တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ကျန်းမာရေးကြောင့် ပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်စာရဲ့ နောက်ဆုံးစာမေးပွဲကို ဝင်မဖြေနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ တက္ကသိုလ်ကအရာရှိတွေအနေနဲ့ အဆိုပါကျောင်းသားကို စာမေးပွဲကျသူအဖြစ် စာရင်းသွင်းလိုက်တာမျိုးပါ။ နိုင်ငံတကာမှာက တစ်နှစ်တာပညာသင်စရိတ်ဟာလည်း အလွန်ကြီးတာကြောင့် စာမေးပွဲကျသူကျောင်းသားတွေဟာ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို ကြုံတွေ့လာရပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းပညာရေးဝန်ကြီး Michelle Donelan က “တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေအနေနဲ့ စာသင်နှစ်တစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံးစာမေးပွဲမဖြေနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ငှဲ့ညှာတဲ့အနေနဲ့ သူတို့အတွက် အဆင်ပြေမယ့် အခွင့်အရေးတွေစီမံပေးသင့်တယ်။”လို့ ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်မရလိုက်တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ပြုလုပ်သင့်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
၁။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုင်းမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရှိပေမယ့်လည်း ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာ နဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေကြောင့်သာဆိုရင်တော့ တက္ကသိုလ်ရဲ့အကြီးအကဲတွေ နားလည်ပြီးလက်ခံပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပြောဆိုသင့်ပါတယ်။
၂။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကို ကိုယ့်ကိုကူညီပေးနိုင်မယ့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းက ဆရာ/ဆရာမတွေကို ပွင့်လင်းစွာပြောပြပြီး အကူအညီတောင်းခံဖို့ ကြောက်ရွံ့မနေသင့်ပါဘူး။
၃။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးက စာသင်နှစ်တစ်ခုရဲ့စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုဖို့အတွက် အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင် ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကို စုဆောင်းထားပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာ/ဆရာမတွေကို ကြိုတင်အသိပေးကာ အကူအညီတောင်းသင့်ပါတယ်။
၄။ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်း အကူအညီတောင်းခံစာကို တက္ကသိုလ်က ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အကြီးအကဲတွေက လက်မခံတဲ့အခါမျိုးမှာ ဘာကြောင့်ခွင့်မပြုလဲဆိုတာကို သိရှိလိုကြောင်း တောင်းဆိုသင့်ပြီး အခွင့်အရေးထပ်ပေးစေလိုကြောင်း အသနားခံစာတင်သင့်ပါတယ်။
Previous တရားစှဲဆိုခံရတော့မညျ့ Lady Gaga ရဲ့ဖခငျ။
Next Coronavirus နဲ့ တက်ကသိုလျ/ကောလိပျတှရေဲ့အခွအေနေ။